ဂရပ်ဖစ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးများအားအားနည်းစေပြီးအကြမ်းဖက်မှုနှင့်တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်သည့်လိင်မှုကိစ္စများသို့ ဦး တည်စေသည် (သြစတြေးလျ) - Your Brain On Porn
ဂရပ်ဖစ်ညစ်ညမ်းဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးများ '' သင်ျခြို '' အောင်နှင့်အကြမ်းဖက်ခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်လိင်အပြုအမူ (သြစတြေးလျ) အားဦးဆောင်လျက်ရှိသည်
သြစတြေးလျကလေးတွေပိုဂရပ်ဖစ်ညစ်ညမ်းရယူသုံးနေကြတယ်, နှင့်၎င်း၏အဆင်သင့်ရရှိနိုင်မှုဆိုးရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်သက်ရောက်သည် - တစ်ဦးစိုးရိမ်ပူပန်သစ်ကိုလိင်လမ်းကြောင်းသစ်အပါအဝငျ။
16 ကဲ့သို့ငယ်ရွယ်ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးများကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်ကြောင့်အလွန်အကျွံအကြမ်းဖက်များနှင့်အမာခံညစ်ညမ်းကြည့်ရှုရန် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုလက္ခဏာတွေကြုံတွေ့ရလျက်ရှိသည်။
စိတ်ပညာရှင်နှင့်စာရေးဆရာ Collett Smith ကရေးသားခဲ့သည် သစ်ကိုစာအုပ် သူတို့ကအိုကေ Be ပါလိမ့်မယ်, ထိုစကားစမြည်မိဘများကသူတို့ကလေးများနှင့်အတူရှိသင့်ရှင်းလင်း။
ကိုင်တွယ်ရန် trickiest အကြောင်းအရာများတစ်ခုမှာခြောမစ္စစမတ်ကဒီမျိုးဆက်သစ်ရဲ့များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်ဟု porn ဖြစ်ပါသည် သွားလာရန်အကြီးမားဆုံးပြဿနာများကို.
"Porn, သူတို့ဆက်ဆံရေးကိုတွေ့မြင်ဘယ်လောက်သူတို့ထဲကအများစုဟာပင်သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးနမ်းခဲ့သို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ဦး၏လက်ကျင်းပမှီလိင်နှင့်ရငျးနှီးသာသက်ရောက်သည်," မစ္စစမတ်ကပြောသည်။
ညစ်ညမ်းအသစ်များကိုသည်မဟုတ်, ယင်း၏ရရှိမှုမှဝှက်ထားသောမဂ္ဂဇင်းများနှင့်ထူးဆန်း VHS တိပ်ကနေသွားပြီ , အမြန်အခမဲ့နှင့်အမြဲပေါ်။ ထိုအခါအကြောင်းအရာကိုယ်တိုင်ကပြောင်းလဲသွားပြီ, သူကဆိုသည်။
"ဒီပြဿနာက porn တွင်ဖော်ပြပါရှိသည်ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လောက်အကြမ်းဖက်မှုများဖြစ်ပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက်ကစားသရုပ်ဆောင်များကိုအသုံးပြုဗီဒီယိုများ - ကိုယ့်ကိုပိုပြီးအကြမ်းဖက်မှုဆယ်ကျော်သက်အမျိုးအစား porn ခေါင်းစဉ်၌ရှိ၏ဘယ်လောက်အကြောင်းကိုအသစ်တစ်ခုသုတေသနစာတမ်းကိုဖတ်ပါတယ်။ ဒါဟာအရွယ်ရောက်ပြီးသူ porn အတွက်ထက်အများကြီးပိုပါတယ်။
"ဆယ်ကျော်သက်လေးတွေကအကွမျးဖကျဖွစျဖို့, sexy ရဲ့သင်ယူနေကြသည်။ ဒီမျိုးဆက်များအတွက်ကြီးမားသောပြဿနာပါပဲ။ "
မစ္စစမတ်ငယ်ရွယ်ကြည့်ရှု၏အမြင်များ warps ထားတဲ့ "တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်လိင်" အဖြစ်အများဆုံးညစ်ညမ်းတွင်ဖော်ပြပါရှိသည်ပြုမူသောအမှုဖော်ပြခဲ့သည်။
"မနူးညံ့ကြင်နာမှုရှိတယ်, ခဲအစဉ်အဆက်ချစ်ခင်၏အဲဒီမှာနမ်းရဲ့မရှိသကြင်နာမှုသို့မဟုတ်တောင်းဆိုနေတာင်, ဒါမှမဟုတ်အခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဂရုစိုက်။ ဒါဟာသင်လိုချင်တာတွေလာပြီထွက်ရတဲ့အကြောင်းကိုပါပဲ။ "
သုတေသီများနှင့်ကျွမ်းကျင်သူများကတစ်မူလတန်းကျောင်းနှစ်အရွယ်တွင်အပါအဝင် porn ကိုကြည့်သားသမီးများ၏တိုးပွားလာနှုန်းထားများမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြသည်။
ပိုများသောယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများနှစ်ဦးစလုံးဖွင့် "အဘယျသို့ဖြစ်ပျက်" နှင့်စနစ်တစ်ခုအဖြစ်ကြည့်ရှုသဖြင့်, လိင်ကွဲအခြေအနေတွေအတွက်စအိုလိင်ဆက်ဆံစဉ်များတွင်ပါဝင်သတင်းပို့ပါ။
"သူတို့ကကနာကျင်ဖြစ်မျှော်လင့်ပေမယ့်ကိုယ့်ကိုလက်ခံအရာပါပဲ - သူကတူလွန်းမကောင်းတဲ့ရဲ့ငါတို့ဘာလုပ်သင့်ရုံဘာလဲ," မစ္စစမတ်ကပြောသည်။
နေရာအများစု, ဆရာဝန်တွေ "စအိုမျက်ရည်" နဲ့ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးအရေအတွက်တိုးကိုမြင်လျှင်နေကြတယ်, သူကဆိုသည်။
"ဒါဟာတကယ်ကိုတုန်လှုပ်ဖွယ်ပါပဲ" ဟုမစ္စစမတ်ကပြောသည်။ "မနူးညံ့သိမ်မွေ့သို့မဟုတ်ကြင်နာမှုအထဲတွင်ရှိပါတယ်။ "
မစ္စစမတ်ကရှုပ်ထွေးသောပြဿနာများနှင့်လေ့လာမှုတစ်ခုထွန်းသစ်စလယ်ကိုဖွင့်ဆိုပါတယ်, ဒါပေမယ့်သူမနှင့်အတူအလုပ်လုပ်တယ်ကျောင်းကတိုင်ပင်မှူးမတ်သူတို့ "ပိုပိုပြီးက" ကိုမြင်လျှင်နေကြသည်ဟုဆိုသည်။
"porn မှ masturbating ဤမျှလောက်အချိန်ဖြုန်းပိုပြီးနှင့်သူတို့တစ်ချိန်ကလုပ်ခဲ့တယ် arousal ၏တူညီသောအဆင့်အထိရရှိရန်လိုအပ်ပိုပြီးဂရပ်ဖစ်သို့မဟုတ်အမာခံအကြောင်းအရာဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်ပါတယ်" ဟုမစ္စစမတ်ကပြောသည်။
"တစ်နှစ် 11 သို့မဟုတ် 12 အတွက်ပိုပြီးပိုယောက်ျားလေးများ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုပြဿနာများ (လက္ခဏာတွေ) နဲ့ရှေ့ဆက်လာမယ့်နေကြသည်။ သူတို့ရင်းနှီးဖြစ်ဖို့ကြိုးစားဘူးသည့်အခါဤအကောင်လေးတွေ၏အချို့ဒီတော့ရည်းစားရှိခဲ့ဖူးဘူး, သူတို့ကနှိုးဆွမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကတကယ့်ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ "
ကောင်းမွန်သောသတင်းသုတေသနလူငယ်များသည်ဤအကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်. မိခင်တွေလည်းနှင့်အဖေမှပြောနေတာမှပွင့်လင်းကြသည်ကိုပြသပြီးသက်တူရွယ်တူထက်သူတို့နှင့်အတူကဆှေးနှေးဖို့ပိုနှစ်သက်မယ်လို့ဖြစ်ပါသည်, သူကဆိုသည်။
သငျသညျရှေ့တျော၌စကားပြောဆိုမှုမရှိခဲ့ဘူးင့်လျှင် "Pre-ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များအတွက်ယခုစတင်ပါ။ ဒါဟာလုံးဝအဆင်မပြေဖြစ်ရန်နှင့်နှစ်ဦးစလုံးကုလားထိုင်အတွက် squirm လိမ့်မယ်သွားရဲ့။ ဒါဟာသင်အစဉ်အဆက်ရှိခဲ့ပါတယ်င်အဆိုးဆုံးစကားပြောဆိုမှုများကဲ့သို့ခံစားမိပါလိမ့်မယ်။ သို့သော် OK ကိုပါပဲ။ တက်မပေးပါဘူး။
"သင်နှင့်အတူစတင်နိုင်ရန် porn ပတ်သက်. စကားပြောဆိုမှုသို့ငုပ်ရန်မလိုပါ။ မေတ္တာနှင့်အချစ်ဇာတ်လမ်းနှင့်ပြိုကွဲအကြောင်းကိုပြောဆိုပါ။ သူတို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့ရုပ်ရှင်သို့မဟုတ်ပြပွဲရည်ညွှန်းကိုးကားနှင့်အကြောင်းသူတို့ကိုမေးကြည့်ပါ။
"ဖြည်းဖြည်းလိင်နှင့်ညစ်ညမ်းကဲ့သို့ trickier အကြောင်းအရာများအချို့နှင့်ဆက်ဆံရာတွင်စတင်နိုင်ရန်ဆက်သွယ်ရေးသူတို့ရဲ့ mode ကိုအသုံးပြုပါ။ "
Collett စမတ်ရဲ့ အသစ်သောစာအုပ် သူတို့က OK ကို Be ပါလိမ့်မယ်ယခုရောင်းချမှုအပေါ်ဖြစ်ပါသည်